Ogaden News Agency (ONA) – xasuuqi dhabajiriso iyo Liistadii Magacyadii oo nasoo gaadhay
xasuuqi dhabajiriso iyo Liistadii Magacyadii oo nasoo gaadhay
Posted by ONA Admin	/ May 30, 2012
Sidii aan idiinku soo gudbinay wararkii ugu danbeeyay waxaa ka dhacay Dhabajiriso oo ka tirsan degaanka Gari-go’an xasuuq baahsan oo loo gaystay dad shacab ah.
Subaxnimadii 27 May 2012 ayay ciidamada cadawga ku waabariisteen reer ka mid ah dadka degen Dhabajiriso oo dhinaca waqooyi kaga beegan ceelka Garigo’an , waxayna ku qaadeen weerar balaadhan.
Ciidanka cadawga oo lagu yaqaan arxandaro iyo cadawtino ayaa waxay kula kaceen dadkii inay gacan bir ah ku qabtaan
Wararka nagasoo gaadhaya xarunta dhexe ayaa sheegaya in sida dadkan loo laayay ay ahayd mid fool xumo ah.
Dadka dhintay oo tiradoodu gaadhayso 8 ruux ayaa loo adeegsaday tooriyo, banadka qoryahay iyo qaarna lagu dilay dhagax.
Dilkan arxandarada ah ee ka dhacay Dhabajiriso ayaa waxa uu ina soo xusuusinayaa kii ka dhacay deegaanka Gunagado iyo Madheedh oo dhinaca bari ka soo dhawra jiirta Dhabajiriso. Dadkan lalayaayay ayaa waxaa ka mid ah arday fasax gaaban u timid reerka oo ka yimid magaalada dhagaxbuur.
Magacyada dadka lalaayay oo aan dib idiinka soo saxnay ayaa waxay kala yihiin;
Macalin aadan xasan kurcas
Maxamed maxamuud cali madoobe
Bishaar axmed cali madoobe
Aadan xasan cabdi shide
Xasan bashiir macalin cabdi
Axmed nuur maxamed xasan
Cabdi rashiid sheikh cabdulaahi sheikh cali dhagood
Tamaan cabdi duwane ismaaciil
Wararka ayaa intaa ku daraya inay jiraan dad kale oo loo taxaabay xabsiyada birqod iyo dhagaxbuur , dadkan la xidhxidhay ayaa tiradooda lagu sheegay inta u dhaxaysa 13 ilaa iyo 15 ruux ,kuwaas oo qaar ka mid ah ay qabaan dhaawacyo halis ah , waxayna magacyadoodu nasoo gadheen dadka kala ah;
Faarax maxamed cabdi odowaa
Taman cali madoobe
Axmed faroole maxamuud cali madoobe
Siraaje axmed fiiqane xasan
Farxaan tamaan cali madoobe
Maxamed cali barre aw xirsi
Gaydh cabdi odowaa oo qaba dhaawac
Geela uu c adawgu ka xaraystay magaalad birqod ayaa waxaa dhamaantii iska leh
Shaafi maxamuud daah
Dhibaatooyinka noocan ah ayaa inta badan ka dhaca wadanka ogaadeen hase yeshee ma jirto cid caalamka ka tirsan oo ka hadasha , iyo cid og midnaba.
Dhinaca kale waxaa ilaa hada ku xaraysan geel tiradiisa lagu sheegay 80 halaad oo laga soo kaxeeyay reerka ay ku dhacday masiibadu , geelaas ayaa maalintii afraad ku gabagabaysan xeryo ciidan dhexdood Islamaalintaa 26May 2012 ee ay dhibaatadu ka dhacday dhabajiriso oo deegaanka garigo’an ah ayaa waxaa lagu xidhxidhay magaalada wardheer dadka kala ah
Sheikh xasan cumar shuuriye
Cabdi nuur xirsi dhaashe
Bashiir maxamuud gaaciye
Arsaa,iil sacaba yare
Gooryaan xuseen mire
Wararka naga soo gaadhay xarunta dhexe ayaa waxay intaa ku darayaan 25 May 2012 in magaalada SAGAG lagu xidhxidhay dad badan qaar dadkaa ka midana loo gaystay dhac hantiyeed waxayna kala yihiin;
Wali axmed yuusuf
Sheikh axmed aadan cali
Maxamed yuusuf khaliif
Cabdulaahi aw bashiir colaad
Axmed siyaad dalmar
Faadumo cabdulaahi xaaji 20 neef oo adhi
Cabdi budul xasan 6000 bir
20 May 2012 ayaa waxaa lagu dilay tuulada laasoole oo ka tirsan degmada shilaabo
Alle ha u naxariistee
Ardo xaashi xade